Page2– မြန်မာ့သတင်း
သတင်းစုံ	ဇာတ်ကားထဲကလိုခပ်ဆန်းဆန်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့မတော်တဆမှုတွေကို…	Author	Feb 20, 2017
0	ချစ်သူများနေ့မတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Fifty Shades Darker ဇာတ်ကားရဲ့ဂယက်တွေက အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံတို့ရှိ ချစ်သူစုံတွဲများကြားမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါ…	သတင်းစုံ	လိမ်မော်သီး ၂လုံး ခိုးစားလို့ဆိုတဲ့ စွတ်ဆွဲချက်နဲ့ အတူ ရေနွေး နဲ့လောင်းခံရတဲ့ ၁၄နှစ်ရွယ်ကလေးမလေး	Author	Feb 20, 2017
0	မော်လမြိုင်မှာ ဒီပုံကို ရိုက်တုန်းက တော်တော် အသက်ရူကျပ် ရင်ထဲအောင့်ခဲ့ရသလို သူ ဘယ်လိုများ ခံစားနေရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ထဲ တော်တော် နာကျင်မိတယ် ... ဘယ်လို စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရက်တာလဲ .... လိမ်မော်သီး ၂လုံး ခိုးစားလို့ဆိုတဲ့ စွတ်ဆွဲချက်နဲ့ အတူ…	ကျန်းမာရေး	ဆေးလိပ် ကိုတစ်ရက်တစ်လိပ်နှုန်းသောက်လျင်ပင် အသက်တိုနိုင်ခြေ မြင့်မား	Author	Feb 20, 2017
0	ဆေးလိပ် ကိုတစ်ရက်လျင်တစ်ဗူးသောက်သူများသည် ကင်ဆာရောဂါမျိုးစုံ ရနိုင်ခြေမြင့်မားပြီး ပုံမှန်နေထိုင်နိုင်မည့် အသက်ထက် များစွာတိုတောင်းသွားနိုင်ရာဝယ် တစ်ရက်လျက်ဆေးလိပ် တစ်လိပ်သာသောက်သုံးသူများသည်လည်း အသက်တိုနိုင်သည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်…	သတင်းစုံ	ယခုအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းအပေါ် ၀င်ငွေခွန် လုံးဝကောက်ခံမည် မဟုတ်	Author	Feb 20, 2017
0	ယခုအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းအပေါ် ၀င်ငွေခွန်ကောက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက အတည်ပြုပြောကြားသည်။ ဘဏ်အတိုးနှုန်းအပေါ် ၀င်ငွေခွန် ကောက်ခံမည့်ကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည် မှန်သော်လည်း ပြည်သူလူထု…	ဗီဒီယို	YBS ရဲ့တံခါးဖွင့်ပုံတဲ့ အဆန်းကြီး ကြည့်ကြည့်	Author	Feb 19, 2017
0	https://drive.google.com/file/d/0B6mfCRJmrkI1VnZhSko5bXdWSTQ/view	ဖိုမ သဘာဝ	ယောက်ျားလေးတွေ… နားထောင်! ခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ ခနရပ်လို့… ကိုယ့် ညာဘက် လက်ဖဝါးကို…	Author	Feb 19, 2017
0	ယောက်ျားလေးတွေ... နားထောင်! ခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ ခနရပ်လို့... ကိုယ့် ညာဘက် လက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ လက်သန်းကြွယ်နဲ့ လက်ညှိုးမှာ ဘယ် လက်ချောင်းက ပိုရှည်နေသလဲ။ -------------------- ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံကို သူ့လက်သန်းကြွယ်က…	ဓါတ်ပုံ	Model လောကမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မြန်မာ Model မလေးပါ။ GYM ကစားထားတာ Body လှတယ်နော်။	Author	Feb 19, 2017